कालोकोटको आवरणमा काला कर्तुत ! « Kakharaa
कालोकोटको आवरणमा काला कर्तुत !
१२ पुस, काठमाडाैं । न्यायको लागि बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायी नै पेशागत आचरसंहिता उल्लघंन गर्ने मात्र होइन, मिगौला तस्क।री जस्ता गँभीर अपराधमा समेत मुछिन थालेका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा १० अधिवक्ताविरुद्ध भ्रष्टाचार तथा फौजदारी मुद्दा चलेको छ ।
नैतिक आचरण र पेशागत मर्यादा उल्लघंन गरेको भन्दै ९९ अधिवक्तामाथि बार काउन्सिलले छानविन गरिरहेको छ । वकालती पेशालाई माध्यम बनाएर अनुचित तरिकाबाट अकुत सम्पति आर्जन गर्ने तथा अपराध कार्ममा लागेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध काउन्सिलमा उजुरी परेको थियो ।
केही समय अघि अधिवक्ता कुमुद भट्टराई फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परे । वकिलहरु रामबहादुर शाह, योगेन्द्र पोखरेल, र बाबुराम शर्मा रेग्मीलाई प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी)ले मुद चलाएको छ । चर्चित अधिवक्ता गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’ पनि ठगी आरोपमा पक्राउ परे ।
पछिल्लो समय अधिवत्तलाविरुद्ध मुद्दाको संख्या बढिरहेका छन् । कतिवय पेशागत सिलसिलामा मुद्दामा तानिएका छन् । कानुन व्यवसायीका लागि आचरसंहिता छ , त्यो पालना नगर्दा पेशागत मर्यादामा आँच आउन सक्छ । यस्ता घटना कसरी रोक्ने भनेर बार एसोसिएसनले पनि छलफल गरिरहेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।